laacibfm.com » Jose Mourinho Oo Ugu Danbayn Shaaciyay Kalmadihii Uu Ku Yidhi Pep Guardiola Dhegta Ugu Sheegay.
Jose Mourinho Oo Ugu Danbayn Shaaciyay Kalmadihii Uu Ku Yidhi Pep Guardiola Dhegta Ugu Sheegay.
Jose Mourinho ayaa ugu danbayn kubbada cagta aduunka u sheegay kalmadihii uu ku yidhi Pep Guardiola ee sawirkooda ugu caansan ee labadan tababare kaas oo uu ku dhex jiro Ibrahimovic.
Waxay ahayd intii lagu jiray kulankii afar dhamaadka Champions League ee xili ciyaareedkii 2009/2010 kii markaas oo ay Jose Mourinho iyo Pep Guardiola oo xifiltankii ugu waynaa kaga dhexeeyay kubbada cagta uu kulan ku dhex maray Camp Nou.
Toban maalmood ka hor oo ku beegan maanta oo jimce ahayd waxay kooxdii Jose Mourinho ee Inter Milan awooday in ay soo dhaaftay kooxdii loo caal waayay ee uu Pep Guardiola hogaaminayay ee Barcelona.
Inter Milan waxaa kaadhka cas laga siiyay Thiago Motta kadib markii uu qalad ku galay Sergio Busquets wuxuuna Mourinho waraysi xaasaasi ah siiyay La Gazzetta dello Sport ayuu kaga hadlay arimo qarsoonaa.
Mourinho ayaa shaaciyay in markii kaadhka cas la siiyay Motta in ciyaartoydii iyo shaqaalihii kaydka u fadhiyay Barcelona ay dabaal deg u bilaabeen sidii ay guulaysteen isla markaana uu Guardiola u sheegay in ayna xafladaynta bilaabin maadaama oo ayna ciyaartu dhamaan.
Mourinho oo hadalkiisa ku bilaabaya halistii uu Thiago Motta oo uu Inter Milan ku maamulayay galiyay Sergio Ramos ayaa yidhi: “Markii uu Busquets dhulka ugu dhacay ugu dhawaan isaga oo miyir beelay, waxaan si toos ah ugu dhexeeyay kursiga kaydkooda iyo kursiga kaydkayaga halkaas oo ahayd goobtii Thiago Motta ciyaarta looga saaray”.
Jose Mourinho oo ka hadlaya wixii uu arkay iyo sababta sawirka caanka ah ee Gauardiola iyo Ibrahimovic uu dhegta hadala u saarayay soo bandhigaya ayaa yidhi: “Dhinaca koornaha ee indhahayga hortooda waxaan ku arkay kursiga kaydka Barcelona oo u dabaal degayay sidii ay guulaysteen. Guardiola waxa uu u yeedhay Ibrahimovic si uu ugala hadlo taatikadiisa ee ahayd 11 ka ka dhanka ah10…..”.
“Waxaan si sahlan isaga ugu sheegay: “Ha bilaabin xafladaynta, ciyaartu wali may dhamaan”. ayuu Mourinho ku sheegay hadalkii uu Guardiola oo Ibrahimovic la hadlayay uu dhegta u saaray waana arin waqti dheer lays waydiin jiray wixii uu Mourinho u sheegay inkasta oo lagu qaldayay in uu dhegaysanayay waxa uu Guardiola u sheegayay Ibrahimovic.
Inter Milan oo 10 ciyaartoy ahayd ayaa difaacashadii ugu adkayd u gashay barcelona waxayna awoodeen in ay xejisteen hogaankii 3-1 ka ahaa ee ay kulankii lugtii hore ku soo guulaysteen inkasta oo uu Gerard Pique xili danbe shabaqa gaadhay.
Mourinho oo ka hadlaya taatikadii uu Barca kaga adkaaday inkasta oo ay ciyaartoy casaan ku waayeen ayaa yidhi: “Waxaa waajib kugu ah in aad garoonka dhexdiisa xal ku hesho. Tani waxay ahayd guushii waayahayga tababaranimo ugu waynayd. 1-0 kumaanu guuladaysan, waxaanu duruuf cajiib ah ku guulaysanay 3-2”.
Jose Mourinho oo ka hadlaya bixitaankii Ibrahimovic ee Inter Milan iyo sidii uu ugu hungooba ujeedadii uu Champions League ku lahaa ayaa yidhi: “Isagu waxa uu iigu soo galay qolka labiska wuxuuna igu yidhi: “Anigu waan baxayaa. Waxaa waajib igu ah in aan ku guulaysto Champions Leauge”
“Caawiyahaygii Talyaaniga ahaa ayaa dhinacooda joogay maadaama oo ay ka fikirayeen in la’aantiisa ayna suurtogal ahayn in ay guulaystaan. Sidoo kale ciyaartoyda ay isku kooxda ahaayeen ayaan doonayn in ay isaga lumiyaan”.
“Aniguna sidoo kale waan walwalay, laakiin waxaan ku dhamaystay aniga oo leh: ‘ Haddii uu doonayo in uu Barcelona tago, waxaanu isku dayi doonaa in aanu la soo saxiixano Eto’o. Isaga iyo Milito wax ka duwan ayay taatiko ahaan na siin karaan” ayuu Mourinho hadalkiisa ku daray.